योनीका आकार थरिथरिकाः यौनसन्तुष्टिमा फरक पर्छ के ? | योनीका आकार थरिथरिकाः यौनसन्तुष्टिमा फरक पर्छ के ? – हिपमत
काठमाडौं,२२ माघ:व्यक्तिपिच्छे मानिसको अनुहार आकारप्रकार फरक फरक हुने गर्छ । सबै मानिसहरुको आकारप्रकार र रुप एकै हुने गर्दैन । ठीक यही कुरा योनी अर्थात् महिलाका प्रजनन अंगको मुख्य भागको हकमा पनि लागू हुन्छ ।